Press Press: Misy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny hozatra ve ny toeran'ny tongotra?
Satria ny fanaovan-gazety ny tongotra dia iray amin'ireo fanazaran-tena nentim-paharazana amin'ny fampandrosoana ny rantsam-batana ambany, voajanahary ny fisian'ny fisalasalana maro miaraka amin'ny teknika vaovao ho an'ity fitaovana ity ihany, noho izany, ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny olana momba ny toerana ny tongotra mandritra ny famonoana. ny fanatanjahan-tena, tena manova zavatra ve izany?
Tato ho ato, ny fiofanana momba ny tongotra dia nanjary sarobidy kokoa tao amin'ireo gym na lahy na vavy.
Izany dia mahatonga ny fikatsahana fanatanterahana fampiharana tsara sy endrika fanatsarana tongotra samihafa matetika.
Ny iray amin'ireo fisalasalana mahazatra momba ny fanodin-tongotra dia ny fiovan'ny toerana misy ny tongotra mandritra ny fanatanjahan-tena.
Ao amin'ny lohahevitra manaraka dia hiresaka momba ny fomba efa fanatanterahana ny Leg press sy ny fiantraikan'izany amin'ny fivoaran'ny rantsanao ambany ianao.
Anatomy maha-olona sy fanatanterahana ny presse leg
Koa satria fanatanjahan-tena marolafy ny press leg, ny fanatanterahana azy dia mametram-bolo hozatra maromaro ary mitaky ny fahamarinan-toeran'ny tonta voaray mba hahafahany manatanteraka azy tsara.
Ny quadriceps, ny hstrings ary ny glute dia voaraikitra betsaka mandritra ny fampiharana.
Ny fampahavitrihana ny hozatra mandritra ny fanatanjahan-tena dia atao mandritra ny hozatra ambany, na inona na inona toeran'ny tongotra.
Hetsika anatomika mitovy amin'ny squat izy io, saingy misy zoro hafa satria vita amin'ny masinina.
Noho izany, arakaraka ny halalin'ny fanatanterahana azy, arakaraka ny ahatongavan'ny lohalika amin'ny vatan-kazo no hitomboan'ny fikorontanan'ny glute sy ny tadin-dokotra noho ny hyperextension hozatra amin'ity tranga manokana ity.
Tena manova zavatra ve ny fiovan'ny tongotra amin'ny tsindry tongotra?
Satria fanazaran-tena iraisana io, amin'ny voalohany, ny fanaovana fanatanjahan-tena amin'ny fanaovan-gazety amin'ny fomba hafa noho ny mahazatra dia tsy manakana ny hozatra tsy voaray.
Koa satria ny vatana rehetra dia vatana, dia toa tsy misy fiovana ny hamafin'ny fientanan'ny hozatra tsirairay na inona na inona toeran'ny tongotra.
Raha mbola hitazona ny toeran'ny anatomika sy ampifanarahana amin'ny tsirairay ny olona, ​​ny tsindry tongotra dia toa afaka mamadika ny ampahany amin'ny hozatra rehetra tafiditra amin'ny fanatanterahana ilay fanatanjahan-tena.
Ny ankamaroan'ny fandinihana dia mampiseho fa tsy misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fanatanterahana ilay fanatanjahan-tena amin'ny tongotra malalaka kokoa, mihidy, lava na ambany eo amin'ilay fitaovana.
Saingy, ny atleta dia mampiasa be dia be ireo fanovana ireo amin'ny fampihetseham-batany mba hiasa amboaran-tsiranoka samihafa eo anelanelan'ny fiovaovana tsirairay, koa inona no tena marina?
Ny tena izy dia ny olona voaofana tsara dia manana fifehezana neuromotor mandroso kokoa sy fahatsiarovan-tena noho ny ankamaroan'ny olona amin'ny ankapobeny.
Noho izany, ny fifandraisana sy ny fifantohana amin'ny fotoana anazaran-tena rehefa ataon'ny atleta dia ahafahana manangona faritra manokana amin'ny hozatra ambany mandritra ny faneren'ny tongotra.
Raha fintinina, arakaraka ny maha lehibe ny fahafantarana ny vatana sy ny maha-lehibe kokoa ny fifehezana ny neuromotor, ny fandraisana ireo hozatra niasa tamin'ny presse an'ny tongotra dia afaka miova be arakaraka ny toeran'ny tongotra ampiasaina.
Satria, ny fiovaovan'ny tsirairay eo amin'ny toeran'ny tongotra dia mety hisy fiantraikany amin'ny fampiononana bebe kokoa amin'ny "fahatsapana" ny hozatra tena mety miasa mandritra ny fampiharana ilay fampiharana.
Iza amin'ireo fiovan'ny Leg Press no ampiasaina?
Ireo fomba fanatanterahana ny fanatanjahan-tena dia mety miova arakaraka ny masinina hampiasana azy, ary koa amin'ny fiononan'ny isam-batan'olona manokana, na izany aza, ny fahita indrindra dia:
Gazety tongotra amin'ny toerana nentim-paharazana
Ny tongotra apetraka amin'ny toerana tsy miandany mifanaraka amin'ny lohalika ary mifanaraka amin'ny sakany sy ny elatry ny soroka.
Fanohanana feno ny lamosina ambany eo amin'ny dabilio sy fihetsika hentitra hitazomana ny faritry ny valahany ho mafy orina.
Amin'ity toerana ity dia misy ny fampahavitrihana ny quadriceps femoris ary rehefa midina kely kokoa noho ny zoro 90 degre dia azo atao ny mampihetsika tsara ny hamstrings.
Potsitra ny tongotra, misaraka ny sakany
Amin'ity toerana misy ny tongotra ity, ny fandraisana hozatra dia misy fiantraikany amin'ny adductors amin'ny feny sy ny biceps femoris.
Miaraka amin'ny tongotra "manondro" ivelany dia vao mainka mihamafy ny fampidirana ireo biceps femoris, raha mihitsitra kosa ny tongotra
nangonina bebe kokoa.
miaraka amin'ny tongotra mifanakaiky
Toerana tongotra tsy dia ampiasaina izy io satria mametraka tsiranoka bebe kokoa amin'ny lohalika ary mety hampitombo ny mety ho ratra amin'ny lohalika.
Amin'ity toerana ity dia misy fandraisana mpiasa bebe kokoa ny quadriceps femoris, ary arakaraka ny haben'ny fivezivezena no mampitombo ny hozatra ho an'ny fampandrosoana tsara kokoa.
miaraka amin'ny tongotra avo sy ambany
Rehefa atao amin'ny tongotra avo kokoa ny tsindry tongotra mifandraika amin'ny lampihazo dia lehibe kokoa ny fandraisana ny kofehy.
Mandritra izany fotoana izany, ny ambany ny toeran'ny tongotra, ny lehibe kokoa ny fampandrosoana ny quadriceps.
Rehefa atao ambany ny tongotra dia mihabe ny hery ilaina, izay mety hiteraka tsy fifandanjana mifandraika amin'ny fiorenan'ny valahana, noho izany, jereo tsara amin'ity tranga ity.
Fanatanterahana gazety an-tongotra tonga lafatra
Ho an'ity dia tsy maintsy ampifanarahana ny lamosin'ny milina mba hijanonan'ny vatana amin'ny zoro 45 degre.
Ankoatr'izay, ny fihetsika dia tsy maintsy mijanona ho mafy orina sy maharitra mandritra ny fampihetseham-batana, indrindra ny valahana.
Aorian'ny fiantohana ny fijoroana mety, atsangano ny lanjany amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny tongotra ary aza manitatra tanteraka ny lohalika, ny tanjona dia ny mitazona ny lanjany amin'ny quadriceps.
Ny dingana manaraka dia ny mamoha ny presse amin'ny tongotra ary manao ny famonoana, mandinika tsara mba tsy hiala amin'ny fihetsika mety ary koa tsy manala ny valahana amin'ny dabilio.
Ahenao ny lanjany hatramin'ny farany izay mety alehan'ny vatanao nefa tsy esorinao ny feny avy eo amin'ny dabilio ary avereno foana ny fizotrany miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena hitazona ny lanja mitazona amin'ny quadriceps anao.
Miadana sy voafehy ny fihetsiketsehana, sorohy ny fipoahan'ny hozatra mba tsy hiteraka be loatra eo amin'ny lohalika ary hiteraka ratra.
Famitana fiofanana amin'ny tongotra
Na dia mampiseho aza ny ankamaroan'ny fanadihadiana fa tsy misy fiovana lehibe eo amin'ny tombotsoan'ny fananganana hozatra vokatry ny fiovan'ny toeran'ny tongotra mandritra ny fanazaran-gazety, azo atao ny manamarina fa arakaraka ny maha-lehibe ny fahalalan'ny vatana, ny dikany bebe kokoa amin'ireo toerana ireo eo amin'ny fampandrosoana ny hozatra. .
Noho izany, ny fanatanterahana tsara ny fampihetseham-batana, ny fikatsahana hanatsarana bebe kokoa ny fahatsapana ny hozatra kendrena kendrena, dia iray amin'ireo lakilen'ity fiovana eo amin'ny toeran'ny tongotra ity mba hisy dikany mandritra ny fiofanana.
Izy ireo dia azo ampiasaina ho paikady hifantohana amin'ny fivoarana manokana amin'ny fehin-kibo hozatra malemy, na, manao laharam-pahamehana ny volavola amin'ny faritra iray.
fiofanana tsara indrindra amin'ny tongotra
fanatanjahan-tena amin'ny tongotra
fanazaran-tena amin'ny tongotra
fanatanjahan-tena tsara indrindra ho an'ny tongotra
fanazaran-tena tsara indrindra amin'ny tongotra
gym fanaovana spaoro tongotra
tongotra ao amin'ny gym
fanaovana fanatanjahan-tena tongotra
legioma fanaovana fanatanjahan-tena
fanofanana tongotra feno
gym fanaovana fanatanjahan-tena
ny fanatanjahan-tena tsara indrindra amin'ny tongotra
gym fampiofanana tongotra
ny fampihetseham-batana tsara indrindra
fanaovana fanatanjahan-tena amin'ny tongotra
Fanatanjahan-tena amin'ny tongotra miaraka amin'ny dumbbells
fanazaran-tena tsara indrindra
gym fanofanana tongotra sy gluteus
fiofanana amin'ny tongotra
fanofanana tongotra dumbbell
inona no fanatanjahan-tena tsara indrindra amin'ny tongotra
fampihetseham-batana ho an'ny tongotra
fanazaran-tena bara ho an'ny tongotra
fiofanana famaritana tongotra
ny fomba fananganana fanatanjahan-tena amin'ny tongotra
inona no fanazaran-tena
fanatanjahan-tena tongotra dumbbell
fiofanana amin'ny tongotra aoriana
fanaovana fanatanjahan-tena gym
fanofanana post post
fiofanana any aoriana
fanaovana fanatanjahan-tena tsara indrindra
fanofanana tongotra sy gluteus
fanazaran-tena eo amin'ny feny ao amin'ny gym
fizarana tongotra zaraina 2 andro
fiofanana tongotra sy gluteus tsara indrindra
fiofanana amin'ny tongotra any aoriana
fanofanana tongotra ho an'ny vao manomboka
fampihetseham-batana amin'ny hozatra
fanaovana fanatanjahan-tena tongotra sy glute
fanazaran-tena ho an'ny tongotra aoriana
fiofanana hamaritana tongotra
tongotra aoriana amin'ny dumbbells
fampiofanana ho an'ny feny ivelany
fanazaran-tena tsara indrindra ho an'ny feny any aoriana
fanazaran-tena ho an`ny fe eo aloha
fiofanana hind sy gluteus
fampihetseham-batana tsara indrindra ho an'ny lehilahy
fanofanana tongotra sy soroka
fiofanana amin'ny feny sy zanak'omby
fanazaran-tena ho an'ny miasa aoriana posterior
fanazaran-tena amin'ny barbell
fampihetseham-batana teo aloha
fiofanana amin'ny barbell sy dumbbell tongotra
fanazaran-tena amin'ny dumbbells
fampihetseham-batana hanamafisana ny vodin-tratra
fanatanjahan-tena amin'ny tongotra aoriana
fiofanana amin'ny feny sy gluteus any aoriana
tongotra lava noho ny gym hafa
fanazaran-tena ho any ambadiky ny feny sy ny gluteus
Tags:fiofanana tsara indrindra amin'ny tongotrafampihetseham-batanafanofanana tongotra